ကား၊ အိမ်နှင့်အခန်း ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများအတွက် | ပင်းဝေ
ကား၊ အိမ်နှင့် အခန်းများအတွက် အလွယ်တကူ ကိုင်ဆောင်နိုင်သော စတော်ဘယ်ရီ လေအေးပေးစက်
ထုတ်ကုန်အမည်- စတော်ဘယ်ရီလေကို သန့်စင်ဆေး
မူရင်းနေရာ - Guangdong၊ တရုတ်နိုင်ငံ
အင်္ဂါရပ်များ- လတ်ဆတ်သည်၊ ချိုသည်။
ပါတီပွဲတွေမှာ သီချင်းဆိုရင်း ပျော်နေတဲ့အခါ၊ လတ်ဆတ်တဲ့ စတော်ဘယ်ရီရနံ့က သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေမှာပါ။ ဒီထုတ်ကုန်အမျိုးအစားက ထမင်းစားခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ စာဖတ်ခန်းနဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကားစဥ်များစွာအတွက် သင့်လျော်ပါတယ်။
ယူနစ်ထုပ်ပိုးခြင်း။ ပလပ်စတစ် + သံဗူး
အဲတုန်းက အိမ်၊ အခန်းတွေနဲ့ ကားတွေ
ပို့ဆောင်ချိန် 10-30 ရက်
1. သင့်လေကို လန်းဆန်းစေပြီး သင့်အသက်ရှုခြင်းကို ပိုမိုလွတ်လပ်ပါစေ။
ထမင်းစားခန်း၊ အိပ်ခန်း၊ စာကြည့်ခန်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကားကဲ့သို့သော အခန်းများ။
လက်ရှိတွင် ကားအတွင်းရှိ လေထုပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်စင်ရန်နှင့် လေထုအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ရန် အသုံးအများဆုံးနည်းလမ်းမှာ သယ်ယူရလွယ်ကူခြင်း၊ အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး စျေးသက်သာပါသည်။ မွှေးရနံ့အတွက် မျိုးစုံရွေးချယ်မှုများ။
1. ဖိထားသော ကွန်တိန်နာ၊ မီး သို့မဟုတ် ရေနွေးနှင့် မပိတ်ပါနှင့်။
2. အေးပြီး ခြောက်သွေ့သောနေရာတွင် ထားပါ၊ နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက် ရှောင်ပါ။
3. ကျေးဇူးပြု၍ ဤထုတ်ကုန်ကို လေဝင်လေထွက်ကောင်းသောနေရာတွင် အသုံးပြုပါ။ မျက်လုံးထဲကို မတော်တဆဖျန်းမိရင် ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပြီး ချက်ချင်း ရေနဲ့ဆေးချပါ။ မသက်မသာ ဆက်လက်ရှိနေပါက ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ကို ချက်ချင်းရယူပါ။
4. ကျေးဇူးပြု၍ ကလေးလက်လှမ်းမမီအောင် ထားပါ။
ယခင်- အိမ်နှင့်ရုံးများအတွက်ထုတ်လုပ်သူစျေးနှုန်းလေအေးပေးစက် Qiaolvdao
နောက်တစ်ခု: မြက်ခင်း ၊ နံရံ ၊ လမ်းဘေး ပန်းချီ အတွက် အဖြူဖြန်း မြေဖြူ လေး ရောင်းနေသည်
Air Freshener ကား
အိမ်သာအတွက် Air Freshener
စိတ်ကြိုက် Air Freshener
ထုတ်လုပ်သူ စျေးနှုန်း လေအေးပေးစက် Qiaolvdao ...
အခန်းများအတွက် Ecofriendly 420ml Air Freshener Spray
အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်း ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် လေအေးပေးစက် Qiaol...
အိမ်သုံး လေအေးပေးစက် 250 မီလီလီတာ တာရှည်ခံဆေးဖြန်း